सुनको मूल्यमा आज भारी गिरावट, तोलाको भाउ रु. ७० हजारभन्दा मुनि Bizshala -
सुनको मूल्यमा आज भारी गिरावट, तोलाको भाउ रु. ७० हजारभन्दा मुनि
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा एकैपटक ७०० रुपैयाँले घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन तोलामा ७०० रुपैयाँले घटेर शुक्रबार प्रतितोला छापावाल ६९ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी ६९ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बिहीबार तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल ७० हजार ६०० र तेजाबी ७० हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
नेपाली बजारमा बुधबार सुन तोलामा एकैदिन ६०० रुपैयाँले घटेको थियो । बुधबार प्रतितोला छापावाल ७० हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी ६९ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार प्रतितोला छापावाल सुन ७० हजार ८०० र तेजाबी ७० हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार सुन तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको थियो ।
यस्तै कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार तोलामा २०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला छापावाल सुन ७१ हजार रुपैयाँ र तेजाबी ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला छापावाल ७१ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी ७० हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
समग्रमा यो साता सुनको भाउ तोलामा १ हजार ३०० रुपैयाँले घटेको छ ।
यसैगरी कारोबारको अन्तिम शुक्रबार चाँदी पनि तोलामा १५ रुपैयाँले गिरावट आएर ८३५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
महासंघका अनुसार बिहीबार चाँदी प्रतितोला ५ रुपैयाँ बढेर ८५० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि बुधबार चाँदी प्रतितोला ८४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
चाँदीको भाउ बुधबार एकैपटक तोलामा २० रुपैयाँले घटेको थियो । मंगलबार चाँदीको भाउ तोलाको ८६५ रुपैयाँ थियो ।
कारोबारको पहिलो र दोस्रो दिन चाँदीको भाउ स्थिर रहँदै तोलाको ८७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
समग्रमा यो साता चाँदीको भाउ पनि तोलामा ३५ रुपैयाँले घटेको छ ।